पानीका कारण हुने रोगबाट कसरी बच्ने ? डा. केदार कार्की – www.agnijwala.com
पानीका कारण हुने रोगबाट कसरी बच्ने ? डा. केदार कार्की
वरिष्ठ परामर्शदाता पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन
डिभाइन भेटेरिनरी क्लिनिक, सिनामङ्गल
पानी मानव शरीरका लागि अनिवार्य तत्व हो । शरीरमा यसको उपस्थित धेरै अर्थमा जीवनदाता मानिन्छ । त्यसैले जल नै जीवन भनिएको हो । मानिस मात्र हैन, सबै सजीव प्राणीका लागि पानीको उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ ।रुख बिरुवा एवम् वनस्पति जगतका साथै कृषि फसल सिंचाइका लागि पनि पानी आवश्यक पर्छ । यो ती पाँच तत्वमध्ये एक हो, जसबाट हाम्रो शरीरको संरचना भएको छ । हाम्रो मन, वाणी, चक्षु, स्रोत तथा आत्मालाई तृप्त गर्छ । पानीविना हामी बाँच्न सक्तैनौँ । शरीरमा यसको कमी भएमा प्यास लाग्छ ।लायुक्त पानी बाहिर आएको हुन्छ । होचो भूमिमा ढल चुहिएर भूमिभित्रको जललाई पनि प्रदूषित गरिराखेको हुन्छ । हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवनदायी जललाई प्रगति एवं विकासको अन्धो दौडमा प्रदूषित बनाइराखेका छौँ । सजीव प्राणीले यस्तो पानीको उपभोग गर्दा रोगको शिकार हुन्छन् । दूषित पानीका माध्यमबाट मानव स्वास्थ्यलाई निम्न प्रमुख समूहमा बाँड्न सकिन्छ ।
दूषित पानीका कारण उत्पन्न हुने रोग स्
विषाणुद्वारा स् जण्डिस, पोलियो गैस्ट्रो इन्टराइटिस, रुघा खोकी सङ्क्रामक हेपाटाइटिस विफर ।
जीवाणु द्वारा स् झाडा पखाला अतिसार पेचिस म्यादी ज्वरो हैजा रुधाखोकी सुजाक, उपदंश जठरांत्र शोध प्रवाहीका क्षण रोग आदि ।
प्राटोजोवाद्वारा स् डायरिया पेचिस निद्रारोग मलेरिया अमी बियोसिस जियार्डियोसिस आदि ।
जुका द्वारा स् फाइलेरिया हाइडेटिज सिस्ट रोग तथा पेटमा विभिन्न खाले जुका पर्नाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
रोग उत्पन्न गराउने जीवबाहेक अनेकौँ प्रकारका विषालु तत्त्व पनि पानीका माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा पुगेर स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्छन् । यी विषालु तत्वमा कैडामी यम, लिड, मरकारी, निकल, सिल्भर, आर्सेनिक आदि छन ।
सफा सुरिक्षत पानी स्
एक गेलन पानीलाई दुई ग्राम फिट्करी २० थोपा टिङचर आयोडिन अलिकति ब्लिचिङ पाउडर मिसाएर शुद्ध पार्न सकिन्छ । चारकोल बालुवा मिश्रित भाँडोले छानेर पनि पानी शुद्ध पार्न सकिन्छ । सम्पन्न मानिसहरु हैलोजनको चक्की राखेर पनि पानी सफा शुद्ध राख्दछन ।